ukujongana: imeko yemowudi yam ibali yesiqendu 1 ngoku simahla kwi-android nakwiios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: I-Minecraft yeNdlela yeNdaba yesiQendu 1 ngoku simahla kwi-Android nakwi-iOS
Umdlalo omhle weMinecraft ophuhliswe ngabantu baseTelltale ngoku uyafumaneka simahla kuzo zombini iiplatifomu ze-Android kunye ne-iOS. Ewe, ubuncinci isiqendu sokuqala simahla, kodwa oko kufanele ukuba kwanele ukukunika umbono wokuba kufanelekile ukuthenga ezinye iziqendu okanye hayi.
Ngokungafaniyo Indie: uHlelo lwePokotho , Telltale & apos; s Minecraft: INdlela yeNdaba yinto yokonwaba eyolula ngaphezulu kwezahluko ezisibhozo. Abadlali baqala uhambo oluyingozi ngaphesheya kwe-Overworld, ngokusebenzisa iNether, ukuya esiphelweni, nangaphaya, njengamalungu oMyalelo oLawulayo weLitye.
Umdlalo uneeklasi ezininzi ezinje ngeQhawe, iinjineli zeRedstone, iGriefer, kunye noMyili, nganye ineziphiwo ezizodwa kunye namandla anokukunceda woyise izilo ezoyikekayo.
Ngaphezulu koko, uTelltale waqesha amanye awona mazwi abalulekileyo kwishishini lezolonwabo ukunika ubomi kwabanye babalinganiswa kumdlalo: UPatton Oswalt (Ratatouille, iiarhente zeSHIELD), uBrian Posehn (Inkqubo kaSarah Silverman, iMountain Hill), U-Ashley Johnson (owokugqibela kuthi, iimbali ezivela kwiBorderlands), uDave Fennoy (Ukuhamba Abafileyo: Uthotho lweMidlalo yeTelltale, iBatman: Arkham Knight) nokunye.
Gcina ukhumbula ukuba ngelixa isiqendu sokuqala simahla, okuseleyo kufuneka kuthengwe kumdlalo we $ 4.99 inye. Nangona kunjalo, ukuba uyasithanda eso siqendu sokuqala kwaye uthathe isigqibo sokuba umdlalo ulixabisile ixesha lakho, ungahlawula i- $ 25 inyanda ebandakanya zonke iziqendu.
Unikelo lwangoku mhlawumbi lujolise kwabo bangazange badlale iMinecraft ngaphambili abekho kule nto, kodwa yeyiphi indlela engcono yokulungisa loo mpazamo ngokusebenzisa isibonelelo sasimahla.
Imowudi yeNdaba yeMinecraft
umthombo: Ivenkile yosetyenziso / Dlala kuGoogle
Isamsung s9 vs lg v30
Umhla wokukhutshwa kwe-iphone 9 ka-2020
Umhla wokukhutshwa komnyele we-galaxy s3
Inkxaso yeebhendi ze-OnePlus 3 4G LTE: nantsi into eza kusebenza kuyo eUnited States
Qiniseka ukuba okwenzekileyo kulo mthengi we-iPhone 11 Pro Max akwenzekanga kuwe
I-Apple iPhone 5c vs Samsung Galaxy S4
I-Verizon vs T-Mobile, i-Sprint kunye ne-AT & T 5G isantya sokudlala kunye nokuthelekiswa kovavanyo lokugqibela
I-HBO Max promo ishenxisa ixabiso lokubhalisa kwiindleko zeNetflix, simahla kubasebenzisi beNje
Ezona meko zintle ze-Apple iPhone 6s-khusela into oyithandayo